Ko Kutengesa Vanhu Kuchadzoserwa Nemarobhoti? | Martech Zone
Ko Vatengesi Vanhu Vachadzoserwa Nemarobhoti?
Chishanu, July 14, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Senraj Soundar
Mushure meWatson akazove shasha yeJeopardy, IBM vakabatana neCleveland Clinic kubatsira vanachiremba kukurumidza uye kugadzirisa iwo chaiwo mareti ekuongororwa kwavo uye mishonga. Mune ino kesi, Watson anowedzera hunyanzvi hwevanachiremba. Nekudaro, kana komputa ikwanisa kubatsira kuita mabasa ekurapa, zvirokwazvo zvinoita sekunge munhu anogona kubatsira nekuvandudza hunyanzvi hwevatengesi zvakare.
Asi, komputa ingazombotsiva vashandi vekutengesa? Vadzidzisi, vatyairi, vafambi, uye vaturikiri, vese vane michina yakangwara kupinda mukati mavo. Kana makumi mashanu muzana ezviitiko zvevatengesi zviri michina, uye ne2020 vatengi vachakwanisa 85% yehukama hwavo vasina kudyidzana nemunhu, zvinoreva here kuti marobhoti anenge achitora nzvimbo dzekutengesa?
Padivi repamusoro peyero yekufanotaura, Matthew King, Chief Bhizinesi Rekuvandudza Officer kuPura Cali Ltd, anoti kuti 95% yevatengesi vanozotsiviwa nehungwaru hwekugadzira mukati memakore makumi maviri. Washington Post ine fungidziro yakaderera mu nyaya yapfuura uko kwavanotaura 2013 Yunivhesiti yeOxford mushumo uyo unotaura kuti ingangoita hafu yeavo vari kushandira muUnited States vari panjodzi yekutsiviwa nemichina mumakore gumi kana maviri anotevera - vachimaka nzvimbo dzehutungamiriri semumwe wevanonyanya kutambura. Uye kunyangwe aimbova Secretary weHaimari, Larry Summers, munguva pfupi yapfuura akataura kuti kusvika makore mashoma apfuura, akafunga kuti maLuddites vaive kudivi risiri renhoroondo uye vatsigiri vetekinoroji vaive kurudyi. Asi, ndokuenderera mberi achiti, Handina chokwadi chakazara izvozvi. Saka, mirira! Vatengesi vanofanirwa kunetseka here?
Ndinovimba, inyaya yekushanda pamwe kwete kupokana. Salesforce Einstein chirongwa chekuchenjera (AI) chakabatana nekudyidzana kwese nevatengi uye zvakare nekuchengetedza rekodhi kwevatengi kuitira kuti vatengesi vazive nguva yekutaura chinhu chakakodzera panguva yakakodzera. Salesforce yatenga makambani mashanu eAI anosanganisira, TempoAI, MinHash, PredictionIO, MetaMind, uye Implisit Insights.
MinHash - AI chikuva uye akangwara mubatsiri kubatsira vashambadziri kukudziridza macampaign.
kukurumidza - AI-inotyairwa smart khalenda chishandiso.
KufanotauraIO - ndiani aishanda pane yakavhurwa sosi muchina wekudzidza dhatabhesi.
Implisit Insights - inoongorora maemail kuona CRM dhata iri chaiyo uye inobatsira kufungidzira kana vatengi vakagadzirira kuvhara chibvumirano.
MetaMind - iri kugadzira chirongwa chakadzama chekudzidza chinogona kupindura mibvunzo ine chekuita nesarudzo yezvinyorwa nemifananidzo nenzira inoswededza pedyo mhinduro yemunhu.
Salesforce haisiriyo yega mumutambo weAI. Munguva pfupi yapfuura, Microsoft yakawana SwiftKey, Mugadziri weAI powered keyboard iyo inofungidzira zvekunyora, uyezve Wand Labs, mugadziri weAI powered chatbot uye tekinoroji yebasa revatengi, uye Genee, AI inofambiswa smart kuronga kuronga mubatsiri.
Sokutaura kwakaita Matthew King:
Izvi zvese zvishandiso zvinogona kuongorora manzwiro evatengi muemail kana nhaurirano yefoni, kuitira kuti vatengesi nevatengi vevashandi vagone kuziva manzwiro evatengi vavo uye maitiro avanoita kumimwe mibvunzo kana kukurudzira. Izvi zvinobvumidza vashambadziri kuti vawane ruzivo rwekuti voita sei mushandirapamwe zviri nani nekutarisa vanhu panguva yakakodzera nemeseji chaiyo zvinoenderana nezvinodiwa nemusikirwo zvemushandisi iyeye.
Asi, iyi tekinoroji ichatsiva munhu anotengesa here? Washington Post anotiyeuchidza iro basa rakabatsirika pamwe chete nezvibereko muzana ramakore rechi19 nerechi20 nekufambira mberi muhunyanzvi. Nekudaro, pamwe ichave iri nyaya yevatengesi vanoshanda padhuze nemarobhoti kuti vaite basa iri nani.
Ndapota yeuka vanhu vanotenga kubva kuvanhu kunze kwekunge vatengi vari marobhoti vasina hanya nekutenga kubva kumarobhoti Asi, zvechokwadi marobhoti ari pano uye zvakanak kushanda navo uye kwete kuita chikanganiso chakafanana chakaitwa naJohn Henry: Usaedze kukunda muchina, ita muchina ubatsire mutengesi kuita. Rega muchina uchere iyo data uye mutengesi avhare chibvumirano.
Tags: aichakagadzirwa njerechatbotgeneekurudzira kunzwisisachirimo chirimoMatthew KingmetamindMicrosoftminhashkuuraPura CaliKugonesa KugonesasalesforceSalesforce Einsteinkurongamunyori wehomweswiftkeynguvaUniversity of OxfordwandlabsWashington Post
Senraj anotungamira manejimendi timu ku ConnectLeader yakanangana nechinangwa chekutanga che "mainjiniya kugona uye basa rakakura revatengi". Asati abatanidza ConnectLeader, akatanga makambani maviri akabudirira epa software anoshandira vashandi vanopfuura zana muUS uye akavandudza zvigadzirwa zve software zvevatengi. Senraj akawana MS muComputer Science degree (ine mbiri yepamusoro) kubva kuYunivhesiti yeMassachusetts uye BS degree muElectrical Engineering kubva kuAna University, Chennai, India. Muna 1992, Senraj akagamuchira mukurumbira 'National Technology Mubairo' kubva kuMutungamiri weIndia mukugadzirwa kwakanaka kwazvo munyika.
Matemplate Eruzhinji Meseji Meseji Unogona Kuda Bhizinesi Rako